MASINA PAOLY - Boky maneran-tany
Rehefa tsy eo i Neny na i Dada
Novambra 25, 2021 ny Grippo, Daniel
Aiza no hividianana ilay boky hoe Rehefa tsy hita i Neny na i Dada nosoratan'i Grippo, Daniel? Inona ilay boky hoe rehefa tsy hita i Neny na i Dada? Ny torohevitra ato amin’ity boky ity dia afaka manampy ny ankizy malahelo noho ny fahafatesan’ny ray aman-dreniny, mba hizara ny alahelony sy hianatra hiatrika izany. . Fampahalalana momba ny boky Rehefa... hamaky bebe kokoa
Sokajy boky Tags editorial, MASINA PAOLY Leave a comment
Novambra 23, 2021 ny Coincider Institute / Guerrero, A.
Aiza no hividianana ny boky Mianara mifandray? Inona no atao hoe boky fianarana mifandray? Torohevitra azo ampiharina 36 hanampy amin'ny famoronana fifandraisana mirindra kokoa sy mety amin'ny ankizy. Fantatra fa ny olon-dehibe dia manan-kery kokoa amin'ny fomba ianaran'ny ankizy haneho hevitra sy hifandray amin'ny tontolo iainany ary… hamaky bebe kokoa
Ny fitondran-tena kristiana, mampahory sa manafaka?
Novambra 23, 2021 ny Martínez Díez, Faly
Aiza no hividianana ny boky momba ny fitondran-tena kristiana, mampahory na manafaka? an'i Martínez Díez, Happy? Inona no dikan’ilay boky hoe Christian Moralidade, Oppressing or Liberation? Mahazatra ny mamantatra ny fitondran-tena ho toy ny rafitry ny didy sy ny fandrarana izay mifehy ny fiainan’ny mpino ary na dia fahavalon’ny fahafahana sy ny fahasambarana aza. Ity asa ity… hamaky bebe kokoa
Ny adin-tsaina sy ny fiadanana anaty
Novambra 22, 2021 ny Amezcua Viedma, Cesareo / Garcia Sanchez, Sylvia
Aiza no ahitana ny boky Stress and peace intine nosoratan'i Amezcua Viedma, Cesáreo / García Sánchez, Sylvia? Momba ny inona ilay boky hoe Stress and Peace? Moa ve ianao mihevitra ny tenanao ho pessimiste sa optimist? Mora kivy ve ianao? Fantatrao ve ny fomba hiatrehana ny fahasorenanao? Betsaka ny toe-javatra misy eo amin’ny fiainantsika andavanandro ka mahatonga antsika... hamaky bebe kokoa
Mba ho renin'ny angano ... na ray aman-dreny
Novambra 12, 2021 ny Gil Martinez, Carmen
Aiza no ahitana ny boky To be a fairy godmother… na a fairy godfather nosoratan'i Gil Martínez, Carmen? Inona no atao hoe boky hoe “To be a fairy godmother… sa fairy godfather”? Midira ao amin'ny tontolon'i Carmen Gil ary mihaona amin'ireo andriana tezitra, matoatoa mampihomehy, renibe piraty… Ity fitambarana tantara ity dia hanampy anao hitombo ao anatin'ny… hamaky bebe kokoa
"Mandehana araka ny fiantsoana izay niantsoana anareo" Ef 4,1
Septambra 23, 2021 ny Sierra Canduela, Jorge A.
Aiza no hividianana ny asa «Mandehana araka ny fiantsoana izay niantsoana anareo» Ef 4,1? Avy amin’ny fifampiraharahana inona no miasa ny “Mandehana araka ny fiantsoana izay niantsoana anareo” Ef 4,1? Tsy hisy dikany intsony ny resaka fiantsoana amin’izao fotoana izao rehefa tsy ho liana intsony ny fimonomononana momba ny finoana, ny fanarahana an’i Jesosy, ny fiaraha-monina, ny fiaraha-miasa, ny fanoloran-tena ary ny fanjakana... hamaky bebe kokoa
Ny lahy sy ny vavy ary ny maha-izy azy
Septambra 22, 2021 ny Teomiro, Fernando
Aiza no hanatrarana ny asa Kilasy, firaisana ara-nofo ary ny maha-izy azy? Inona no asa momba ny kilasy, firaisana ara-nofo ary ny maha-izy azy? Ny fahasamihafan'ny fomba famenoana sy fanehoana ny maha-lahy sy maha-vavy ny maha-lahy sy maha-vavy azy dia hadalana miharihary eo amin'ny fiaraha-monina misy antsika. Ny fiatrehana ny dysphoria isan-karazany, indrindra ny zaza tsy ampy taona, dia ny fanasongadinana ny faharatsian'ny… hamaky bebe kokoa
Kristianina eo amin’ny fiaraha-monina
Jolay 5, 2021 ny Rodriguez Gamez, Juan Carlos
Aiza no hividianana ny boky Christians in community nosoratan'i Rodríguez Gámez, Juan Carlos? Inona no resahin’ny boky Kristianina eo anivon’ny fiaraha-monina? Ny maodely amin'ny fiainam-piarahamonina atolotry ny Fiangonana amin'izao fotoana izao dia tsy mamaly ireo izay mitady toerana hivelaran'ny fiaraha-monina misokatra sy mifangaro izay mampifandray ny tena manokana, ny fiarahamonina, ny sosialy ary ny… hamaky bebe kokoa
Ny smut sy ny lavenona
Jolay 5, 2021 ny Fernandez Barrajon, Alejandro
Aiza no hividianana ilay boky Ny marika afo sy ny lavenona? Momba ny inona ilay boky hoe The Brand and the Ashes? Ny manokan-tena anio dia sahy. Rehefa miziriziry amin’ny fisaratsarahana sy ny fifanandrinana ny tsirairay, ny olona masina dia maniry ny ho fihina ho an’ny rehetra. Nianatra izany tamin’i Jesosy izy ireo. Ary, satria, na dia vitsy sy antitra aza izy ireo,… hamaky bebe kokoa
Jolay 5, 2021 ny Guevara, Miren Junkal
Aiza no hividianana ny boky Tamara? Inona no resahin’ny boky Tamara? Ny teny hoe "tamara" dia nadika hoe "hazo palmie", hazo izay mahatratra dimy ambin'ny folo metatra ny haavony ary mariky ny fahalehibeazana sy ny faharetana. Tamara (Gen. valo amby telopolo), vinantovavin’i Joda izay tsy nanana fahafahana hanorina indray ny fiainany teo amin’ny Isiraely, … hamaky bebe kokoa